Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment बसभित्र माैन बसाैँ - Pnpkhabar.com
काठमाडौं, ६ कात्तिक : सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरी दसैं मनाउन बस चढेर घर जाँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि यी उपाय अपनाउन नबिर्सिनुहोला। बसभित्र फेससिल्ड र मास्क लगाऔं। मौन बसौं। झ्याल खुलै राखौं।
प्रवक्ता डा. गौतमले लामो यात्रा गरेको व्यक्तिलाई गाउँघरमा देखे सात दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने बताए। ‘कोरोना सार्ने सम्भावना भएकोले केहि दिन क्वारेन्टाइनमा राख्न भनिएको हो’, उनले भने। दिनेश गाैतमले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।